ကောငျးဘဝကဘာလဲ? — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ငွေတစ်ဦးအရာသည်မဟုတ် "ကဲ့သို့ငါအကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေကိုခဲ့,သူဌေး Get သို့မဟုတ်ကြိုးစား Die "နှင့်ငါနှင့်တူခေါင်းစဉ်နှင့်အတူအယ်လ်ဘမ်ကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ်" ။ "တကယ့်ကောင်းကျိုးကိုအသက်တာ၏အကြှနျုပျ၏စိတ်ကူးတစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်ဒါကြောင့်ပင်နီးကပ်အလိုမရှိကြောင်းကျပ်ရှိခြင်းခဲ့ကွောငျးအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်. ဒါဟာအားလုံးပိုက်ဆံအကြောင်းမဟုတ်ခဲ့, သော်လည်း. ငါ hedonism အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ, ပေါ့ပေါ့လိင်, ရုပ်ဝါဒ, တာဝန်မဲ့မှု, ပျင်းရိခြင်း, မူးယစ်ဆေးဝါးများ, နှင့်ရိုသေလေးစားမှုရတဲ့ - ကောင်းကျိုးကိုအသက်ပေတည်းသောပဟေဠိဖို့ကိုအပိုင်းပိုင်းအဖြစ်အားလုံး.
ငါသည်ဤကောင်းသောအသက်တာ၏လေပုံမှာနှင့်အတူအဓိကပြဿနာကငါ့ကိုတစ်ဝှမ်းဗဟိုပြုခဲ့. ဒါဟာအားလုံးငါ့အကွောငျးခဲ့သည်. ငါဘယ်လိုပိုက်ဆံရနိုင်? အဘယ်သို့ငါလေးစားမှုရနိုင်? ငါဘယ်လိုအဆင့်အတန်းရနိုင်? ငါဘယ်လိုကမ္ဘာပေါ်တွင် run နိုင်ပါတယ်? အဘယ်သို့ငါနားထောင်ပြီးနှင့်စားခဲ့သည်မုသာတစည်းခဲ့သည်. နှင့်လူငယ်များ၏ရေဒီယိုကိုဖွင့်သောအခါ, ကောင်းသောအသံကအများကြီး hip-hop လည်းမရှိသော်လည်း, ထိုသို့ဤမျှလောက်ကောင်းကျိုးဘဝကိုတကယ်ကဘာလဲဆိုတာအကြောင်းသည်မုသာနှင့်ပြည့်စုံသည်.
သော်လည်းငါ့ကိုမှားရမနေပါနဲ့. hip-hop ဂီတပြဿနာမဟုတ်ခဲ့. သူတို့သညျအပွစျရှိမုသာစကားကိုခဲ့ကြ. ငါ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အဖြစ်မှန်င်သောကွောငျ့ငါ hip-hop အပေါ်ထဲမှာချဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်. ငါ hip-hop ကိုမုန်းပါတယ်နိုင်, ငါမူကားနေဆဲအခြားသူတစ်စုံတစ်ယောက်မှသူတို့အားအတိအကျတူညီသည်မုသာကိုကျွေးမွေးခဲ့ကြပေသည်. အကြှနျုပျ၏ Self-ဗဟိုပြု, ဘုန်းအသရေ-ဆာလောင်မွတ်သိပ်နှလုံးသူတို့ကိုကိုက်စားကြ၏.
ငါသညျယရှေုကိုတွေ့သောအခါဒါပေမယ့်အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်. ငါသည်ဤလောက၏အသစ်တစ်ခုရုပ်ပုံနှင့်အသက်တာ၏အသစ်တစ်ခုရုပ်ပုံနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့. ဒါကြောင့်လဲအပြည့်အဝမှအသက်တာဖြင့်အသက်ရှင်ဖို့ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆအားအသစ်ရှာပုံတော်အပေါ်ခဲ့သည်. ငါတော့ဘူးဘဝကိုမုသာအလငျး၌အသက်ရှင်ရန်လိုခငျြဘူး. ငါအမှနျတရားချင်တယ်.
ငါတို့သည်အသက်ရှင်နေထိုင်သင့်တယ်ဘယ်လိုအကြောင်းမုသာစကားကိုယုံကြည်ရန်ဆက်လက် အကယ်., အကျိုးဆက်များကိုအဓိကဖြစ်ကြောင်း. ကျနော်တို့အချို့သောအခြား option ကိုအသကျရှငျမညျမဟုတျ; ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးခဲ့ကြရာလမ်းကိုအသကျရှငျမညျမဟုတျ. ကျနော်တို့အရေးမပါဘူးပစ္စည်းပစ္စယပြီးနောက်လိုက်ဖမ်းကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာဖြုန်းပါလိမ့်မယ်. ကျနော်တို့ကြီးမားတဲ့ရုပ်ပုံလွှာလက်လွတ်လိမ့်မယ်. ကျနော်တို့စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုခံစားရမည်မဟုတ်. ငါတို့သည်လည်းအသက်ရှင်ရန်ဖန်တီးခဲ့ကြတူငါတို့သည်လည်းအသက်ရှင်မည်မဟုတ်. ကျနော်တို့ကောင်းသောအသက်တာဖြင့်အသက်ရှင်မည်မဟုတ်.
၏သင်တန်းကိုသမ္မာကျမ်းစာ၌ "။ ကောင်းကျိုးသကျ" ဟူသောဝေါဟာရကိုအသုံးပြုသည်ဘယ်တော့မှဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က "ကောင်းသောဘဝ" ဟုပြောလာသောအခါကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နိုင်အသက်တာ၏အကောင်းဆုံးကြင်နာဆိုလို. ဒါနဲ့အသက်တာ၏အကောင်းဆုံးကြင်နာသမ္မာကျမ်းစာသည်အဘယ်သို့မှာရချင်. ငါကျွန်တော်တို့ကိုငါတို့သည်လည်းအသက်ရှင်ရန်ဖန်တီးခဲ့ကြရာလမ်းကိုအသကျရှငျခငျြ. ဒါကြောင့်ငါသည်ကောင်းသောအသက်တာသည်အရာသုံးခုကိုကြည့်ရှုချင်.
ငါသည်ကောင်းသောအသက်တာကိုသတ်မှတ်ပုံကိုဖွင့်သောစာအုပ်ထဲတွင်. ကောင်းတစ်ဦးဘုရားသခင်၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်နေထိုင်ခြင်း. ငါ့ကိုအဘယ်ကြောင့်ပြောပြပါရစေ.
ကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်ဖြစ်စေမ, ကြှနျုပျတို့အားလုံးယုံကြည်ခြင်းကိုလူဖြစ်ကြ၏. တိုင်းလူ့ဖြစ်လျက်ရှိ. ခရစျယာ, မွတ်စလင်များ, ဟိန္ဒူဘာသာ, ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ, Agnostic, ဘုရားမဲ့ဝါဒီ - ကြှနျုပျတို့အားလုံးယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်, ကျမတို့ကလည်းဘယ်ပေးထားယခုအချိန်တွင်အတွက်ကျနော်တို့ယုံကြည်ရာ၏အလငျး၌နထေိုငျ. အားကစားသမားနေသောသငျသညျမြားကိုတကယ်ခက်ခဲလေ့ကျင့်. အဘယ်ကြောင့်? သင်ကသင့်ရဲ့အားကစားမှာသင်ပိုကောင်းစေပါလိမ့်မည်ယုံကြည်သောကြောင့် (သငျသညျအကြှနျုပျကိုဘတ်စကက်ဘောကစားခြင်းကိုတက်ကြီးထွားလာနေဆဲတကယ်ကိုမကောင်းတဲ့ဖြစ်ခြင်းခဲ့ကြသည်မဟုတ်လျှင်). ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုဤအကြောင်းကို. သငျသညျအခြို့ကိုယနေ့ကဒီမှာရရန် Google Maps မှာလိပ်စာထား. အဘယ်ကြောင့်? သောကြောင့်သင်သည်သင်၏ဖုန်းကိုသင်ျာလမ်းညွန်ပေးလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်. သငျသညျယုံကြည်သည်ဆိုပါကသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသငျသညျလှည့်စားမယ်လို့, ငါငါ့ဥစ္စာတခါတရံမထင်, သင်ကအသုံးပြုခဲ့ကြမည်မဟုတ်. ငါအပေါ်သွားနှင့်အပေါ်နိုင်. ဒါပေမယ့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်.
ငါစာအုပ်၌ဤအကြောင်းပြောဆို. ငါလမ်းညွန်နှင့်အတူတကယ်မကောင်းတဲ့ရယ်. ကျွန်တော့်ဇနီးငါလမ်းညွန်နှင့်အတူဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုစကားမပြောနိုင်သောမှာတစ်သမတ်တည်းအံ့သြသည်. ငါလှည့်မှတစ်ဦးသည့်ကားလမ်းသို့ ဝင်. ဆွဲတစ်ခုမှာအချိန်, ထိုအခါမူကားငါတူညီသောလမ်းထွက်ပြန်လေ၏. တကယ်ပဲမကောင်းတဲ့. ဒါဟာသင်ဦးဆောင်လမ်းပြဖို့ငါ့ကိုယုံကြည်ရန်အလွန်စကားမပြောနိုင်သောဖြစ်လိမ့်မယ်. အလားတူပင်, ကြှနျုပျတို့အားလုံးပြိုလဲလျက်ရှိ. ငါတို့စိတ်နှလုံးကိုမှားညှနျကွားခအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်. မာရ်နတ်ကျွန်တော်တို့ကိုမုသာစကားကို feeds, ကမ္ဘာပေါ်တွင်သူတို့ကိုဖြန့်ဝေ, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုသူတို့ကိုကိုက်စား. ဒါကြောင့်အစားငါတို့စိတ်နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြခွင့်ပြု, ကျနော်တို့အမှန်တရားမှာယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်.
ထိုအခါအကောင်းဆုံးယခုဘဝအသကျရှငျဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြဖို့အကောင်းဆုံးတယောက်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်. သူ့ကိုကောင်းကင်ဘုံမှသဲလွန်စ drop ရန်အဘို့အကျနော်တို့မစောင့်ဘူး; ကျွန်တော်တို့သူပြီးသားကပြောပါတယ်ယျမှာကြည့်ရှု. ကျွန်ုပ်တို့၏ပြဿနာငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သမ္မာတရားကိုကျော်ရန်သူသည်မုသာစကားကိုယုံကြည်ဖြစ်ပါသည်.
ဘုရားသခငျသညျအာဒံနဲ့ဧဝကိုဖန်တီး. သူကသူတို့ကိုအသက်ရှင်ဖို့ဘယ်လောက်အဘို့ညွှန်ကြားချက် ပေး.. သူကသူတို့တိုင်းပင်မှအသီးကိုစားရနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်, ကောင်းကျိုးကိုသိကျွမ်းရာအပင်ကိုဒုစရိုက် မှလွဲ..
အခုတော့မြွေသည်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောသောလယ်​​ပြင်၌မဆိုအခြားသားရဲတကောင်ထက်လိမ္မာသည် ဖြစ်. ။ သူကမိန်းမအားကပြောပါတယ်, "ဘုရားသအမှန်တကယ်ပွောဆိုခဲ့ပါ, 'You အ garden' အတွက်မည်သည့်အပင်၏အသီးကိုမစားရ?"ထိုမိန်းမသည်မြွေအားဆို၏, "ကျနော်တို့ကဥယျာဉ်တော်၌အပင်တို့၏အသီးကိုစားစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်က, 'You ထိုဥယျာဉ်အလယ်၌သောအပင်၏အသီးကိုမစားဘဲနေရကြလိမ့်မည်, သင်ကမထိရကြလိမ့်မည်မဟုတ်, သငျသညျ die.' "ဒါပေမယ့်မြွေဟုမိန်းမအားမေးမည်ကို စိုးရိမ်., "သင်တို့သည်ဧကန်အမှန်သေရမည်မဟုတ်. ဘုရားသခငျသညျသငျကကိုစားရသောအခါသင်၏မျက်စိဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်သိတယ်များအတွက်, သငျတို့သညျဘုရားသခငျကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်, ကောင်းသောမကောင်းသောအကျင့်ကိုသိမှတ်ကြလော့။ "ဒါကြောင့်ထိုမိန်းမသည်ထိုအပင်သည်စားဘွယ်ကောင်းခြင်းကြောင်းကိုသိမြင်လျှင်, ထိုသို့တစ်ဦးဖွစျကွောငျး မျက်စိ၌မွေ့လျော်, နှင့်သစ်ပင်ကိုတဦးတည်းလိုငှါပညာကိုအလိုရှိသောခံရဖို့ခဲ့သည်, သူမအသီးကို ယူ. စား၏, သူမလည်းသူမနှင့်အတူပါသောသူမ၏ခင်ပွန်းအားလည်း ပေး., သူသည်လည်းစား၏. (ကမ်ဘာ​​ဥ​​ီး 3:1-6 တော်မူ၏)
အာဒံနဲ့ဧဝကိုဘုရားသခငျ၏အမှနျတရားကိုကျော်မြွေ၏မုသာစကားကိုယုံပါ. ဒီအဖြစ်ကိုကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပြဿနာဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတဲ့အခါသူတို့ဘုရားသခင်ထက်ပူဇော်ဖို့ပိုကောင်းတစ်ခုခုရှိသည်သောကမ္ဘာယုံကြည်. ထိုသို့ website ကိုကြည့်ရှုဖို့ကိုဖျောပွရသောအခါကျနော်တို့အသားကိုယုံကြည်. သူကငါတို့ဠာ၏အလယ်ဗဟိုမှာနေကပြောပါတယ်သောအခါအကျွန်ုပ်တို့သည်မာရ်နတ်ယုံကြည်. ကျနော်တို့သူတို့အားမုသာစကားအစားဘုရားသခင်၏သမ္မာတရားယုံကြည်. ထိုကောင်းကျိုးဘဝကနေကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်သောအရာကိုင်.
ငါတို့သည်ငါတို့၏အပြစ်များကိုဖွင့်သည့်အခါကောင်းသောဘဝကစတင်ခဲ့သည်, ကျွန်တော်တို့နောက်ကွယ်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့မနာခံမှုအပေါငျးတို့သထားခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, ကျွန်တော်ယေရှု၌ငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းထား. စစ်မှန်တဲ့ဘဝကစတင်ခဲ့သည်သောအခါင်. သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအားရှိမဆုံးပါဘူး. ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ဆက်လက်နေ့စဉ်စစ်တိုက်ရန်ရှိသည်များနှင့်ရန်သူ၏မုသာကိုကျော်ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်.
ယုံကြည်ခြင်း AN နေ့စဉ်တိုက်ပွဲများ IS
ငါကဒီမှာယနေ့ညတစ်ခုတည်းသောအပြစ်သားမဟုတ်ဘူးသိ. မကြာခဏငါတို့သည်ပြစ်မှားကြသောအခါထင်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အားနည်းခြင်း၏ဤအခိုက်ခဲ့လို့ဖွင့်. သို့သော်တပြင်လုံးကိုပုံပြင်မဟုတ်ပါဘူး. ဒုစရိုက်ရှိသမျှပြဿနာယုံကြည်ခြင်းပြဿနာဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့မယုံကြည်သောကြောင့်ဒုစရိုက်ကိုပြု. ကျနော်တို့ကရန်သူ၏မုသာ ယုံကြည်. ဘုရားသခင်၏သမ္မာတရား၏အစားသူတို့ကိုစကားကိုနားထောငျ.
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အာဏာစကားနားမထောင်သောအခါ, ကျွန်တော်တို့အခွင့်အာဏာကျွန်တော်တို့ကိုထိခိုက်နစ်နာစေရန်လည်းမရှိသောမုသာစကားကိုကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမယုံကြည်သောသူဖြစ်သောကြောင့်င်. ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ယုံကြည်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကသူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောငျးကြိုးအတှကျအရပျ၌အခွင့်အာဏာကိုတင်ကပြောပါတယ်သောအခါရဲ့. အကြှနျုပျတို့လက်မထပ်မီလိင်တဲ့အခါ, ကျနော်တို့မုသားယုံကြည်ကြောင့်င်, ကကိုယျ့ကိုယျကိုခံစားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရဲ့. ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ယုံကြည်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာလိင်အိမ်ထောင်သည်အဘို့ဖြစ်၏ကပြောပါတယ်သောအခါရဲ့, နှင့်ကမှန်ကန်စွာခံစားင်ရှိရာအခြေအနေတွင်င်.
ရောမမှာတော့ 1, ပေါလုကသူကို "ယုံကြည်ခြင်းကိုနာခံမှု" အကွောငျးကိုရောက်စေဖို့အလုပ်လုပ်ပြောပါတယ် - ယေရှု၌ယုံကြည်ခြင်းမှစီးဆင်းသောနာခံမှု. ဒါကြောင့်ငါတို့သည်အဘယ်သို့သောယုံကြည်ခြင်းအဘို့အကိုတိုက်ဘူး? ငါတို့သည်ငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်လိုအစာကျွေးဘူး?
ရောမ 10 ကပြောပါတယ်, "ယုံကြည်ခြင်းကြားနာခြင်းအားဖြင့်ကြွလာ, ခရစ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာ။ "
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့စပြီးကတူညီတဲ့နှင့်အတူဆက်လက်. ဒါပေမယ့်နေ့တိုင်းငါတို့သည်ဤလောကမှမုသာစကားအားဖြင့်တရစပ်ခံရပါတယ်, ဇာတိပကတိ, နှင့်မာရ်နတ်လက်ျာ? သငျသညျမုသာကိုဘယ်လိုတိုက်ထုတ်ကြပါ? မှနျတရားနှငျ့! ဒီတော့ဒီမှာဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသုံးပွုဖို့မည်သို့ဥပမာတစ်ခုဖွင့်. နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့လိင်အကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုနားထောငျ, ညစ်ညူးပုံရိပ်တွေနှင့်အတူတရစပ်, နှင့်ငါတို့အပွစျရှိစိတျနှလုံးကအလိုရှိသောနှင့်ထိုမုသာစကားကိုယုံကြည်. ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့မှနျတရားနှငျ့သူတို့အားမုသာကိုစစ်တိုက်ခြင်း. ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမတရားသောမေထုန်နှင့် ပတ်သက်. အဘယ်သို့ပြောပါဘူး?
ဒီအတှကျဘုရားသခငျ၏အလိုတော်ရှိ၏, သင့်ရဲ့သန့်ရှင်းစေခြင်း: သငျသညျမတရားသောမေထုန်ကိုကြဉ်ရှောင်ကြောင်း; သငျသညျတစျဦးစီသန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ဂုဏ်အသရေရှိသူ၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဘယ်လိုသိသော, ဘုရားမဖြစ်မသိရပါဘူးသူကိုသာသနာပလူကဲ့သို့အတပ်မက်၏စိတ်အားထက်သန်မှုရှိ. (1 သက်သာလောနိတ် 4:3-5 တော်မူ၏)
ကျနော်တို့ကကားကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏. ကျနော်တို့ဓာတ်ငွေ့နေ့စဉ်ထဲက run. ယုံကြည်ခြင်း၌လမ်းလျှောက်ရှေ့ဆက်ရန်, ကျွန်တော်တို့လောင်စာလိုအပ်. ဒါကလောင်စာဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်. ကျနော်တို့ကလောင်စာရှိသည်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျနော်တို့ကသူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားအားဆက်လက်မည်မဟုတ်. ကျွန်တော်တနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မဖတ်ကြပါလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုးသောအခါကြှနျုပျတို့ဘုရားမဲ့ဝါဒီဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုဘဲ. သို့သော်လည်းငါသည်နှုတ်ကပတ်တော်၌မရယ်ကြသောအခါ, ငါကခံစားမိ. ငါမယုံကြည်သောငါ့အသက်ကို၏အမျိုးမျိုးသောဒေသများရှိယုံကြည်ခြင်းကိုထွက် crowding ခံစားရ.
ဒါပေမယ့်နေ့တိုင်းအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြလော့, အဖြစ်ကြာမြင့်စွာက "ဒီနေ့လို့ခေါ်ပါတယ်အဖြစ်,"သင်၏အဘယ်သူအားမျှအပြစ်တရား၏လှညျ့စားခြင်းဖြင့်ခိုင်မာစေခြင်းငှါ. (ဟေဗြဲ 3:13 တော်မူ၏)
ယုံကြည်သူများနေသောဒီအခန်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ယနေ့ညအဘို့, အခြားခရစ်ယာန်များကိုအတူကဲ့သို့သင်တို့ဆက်ဆံရေးကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ? သင်ရုံအသင်းတော်ကိုတက်ရောက်ရန်သို့မဟုတ်သင်အခြားသူများနှင့်ကောင်းသောအချိန်ဖြုန်းကြဘူးလုပ်ပါ? ကျနော်တို့ကတကယ်တော့အခြားခရစ်ယာန်များအားနှင့်အတူသွားလာရန်လိုအပ်ပါတယ်. ကျနော်တို့အနီးကပ်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. ကျနော်တို့တာဝန်ခံများအတွက်အသီးအသီးအခြားလိုအပ်. ငါသည်ငါ၏မယားကိုခြိနျးတှေ့ခဲ့ရတဲ့အခါ, ကြီးမားတဲ့အရာဘဝမှာလူကျနော်တို့ရဲ့နယ်နိမိတ်မှအကြှနျုပျကိုတာဝန်ခံကိုင်ဆောင်ခဲ့သည်.
သငျသညျခရစျတျော၌သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်ပြီးပြီဆိုပါက, သင်၌အပ်ပေးရန်မလိုပါ. သငျသညျလွတ်မြောက်လာပြီ. တဖန်သင်တို့ကလွတ်လပ်ခွင့်၌ကျင်လည်ရသောအခါ, ဒါကြောင့်ခံစားခံရဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့သကဲ့သို့သင်တို့အသက်တာကိုပျော်မွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်. သငျသညျအကြှနျုပျတို့နထေိုငျဖို့ဖန်တီးခဲ့ကြရာလမ်းကိုအသကျရှငျနိုငျမညျ.
ဒါကြောင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဘို့စစ်တိုက်ကြ, သျောအဘယျနာခံခဲ့ဘူး, တူသစ္စာစောင့်သောအသက်တာကိုကြည့်ရှု? ကျွန်တော်တစ်ဦးကောင်းသောဘုရားသခင်၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်သောအခါဘာကြောင့်တူကိုကြည့်ရှုဘူး?
II ကို. အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝသညျယရှေုခန့်တည်ဆောက်သည်
IS Gain သေဖို့
ကြှနျုပျတို့အားလုံးလူအခြိနျမှနျမှသေခြင်းတရားအကြောင်းပြောဆိုဆွေးနွေးကြားရကြပြီ. ကျနော်တို့လူတွေပြောပါကြားဖူးတယ်, "အသက်တာ၌အဘယ်အရာကိုမျှမြဲမြံသောဒါပေမဲ့သေခံခြင်းနှင့်အခွန်အခများသည်။ " တစျခုမှာလူကြိုက်များရက်ပ်ကပြောပါတယ်, "ငါသည်သေခြင်းသို့ခိုးလို့မရပါဘူးအကြောင်းကြောင့်ငါ 'ဘဝရိုက်နှက်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ " လူတွေကသေခံခြင်းများကိုရှောင်ရှားမရနိုင်သည်ကိုနားမလည်. သို့သော်လူငယ်တစ်ဦးခရစ်ယာန်အဖြစ်, ငါအစဉ်အဆက်တို့ရှေ့မှာကြားဖူးဘာမှမတူခဲ့သောကမျြးစာ၌သေခြင်းအကြောင်းတစ်ကျမ်းပိုဒ်ကိုဖတ်. တမန်တော်ပေါလုကထူးဆန်းတဲ့လမ်းအတွက်အသေခံအကွောငျးပွော. ပေါလုကန့်အသေခံအချို့သောခဲ့မပြောခဲ့ပါဘူး, သူတစ်ဦးခြေလှမ်းနောက်ထပ် ယူ.. ဟုသူကပြောသည်, "သေဖို့အမြတ်ဖြစ်၏။ " အဘယျသို့!?
အခါသင့်ဦးနှောက်ကိုသေမင်းသည်, သငျ့နှလုံး, နှင့်သင့်အဆုတ်သူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်နေကြရပ်တန့်. သေခြင်းသို့မိသားစုဝင်များမှအသက်နှင့်ခွဲခြာ၏နိဂုံးကိုဆိုလိုသည်. သခွေငျးတရားသင်၏အသက်တာရဲ့အလုပ်ကျော်ဆိုလိုတာပါ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားစမ်းသပ်မှုတွေမတူဘဲ, သေမင်းသည်, ကွယ်လွန်သူများအတွက်, စာသားအရ "ဤလောက၏အဆုံး" - ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်ခု၏အဆုံး. ဒါကြောင့်ဘယ်လိုသေဆုံးဖြစ်နိုင်သည်အမြတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်? ငါသေသောအခါငါငွေရှာမရနိုငျ? ငါသေရသောအခါငါသည်ငါ့အဆင့်အတန်းကိုတိုးမြှင့်မနိုင်. ဒါဟာရုံကောင်းသောအသက်တာ၏အကြှနျုပျ၏ဟောင်းအမြင်များနှင့်အတူ fit ဘူး.
ကောင်းပြီငါပေါလုသည်ဤလေးယောက်စကားအားဖြင့်ဓိပ်ပာယျကိုနားလညျဖို့အတှကျနိုင်ရန်အတွက် - "သေဖို့အကျိုးစီးပွါး" - ငါလက်ျာဘက်သူတို့ရှေ့မှာလာသောလေးနားလည်ခဲ့ရတယ်. ဖိလိပ္ပိခုနှစ်တွင် 1 သူအသကျရှငျနထေိုငျသို့မဟုတျသူ၏ညှဉျးဆဲ၏လက်မှာသေဆုံးတစ်ခုခုနှင့်အတူ OK ကိုဖြစ်ဟန်အဘယ်ကြောင့်ရှင်ပေါလုကရှင်းပြသည်. သူကအခန်းငယ်ထဲမှာရေးသားခဲ့သည် 21, "အသကျရှငျဖို့ ဖြစ် ခရစ်တော်။ "အဲဒီစကားနဲ့အတူ, မပိုက်ဆံ - တမန်တော်အမှန်တကယ်အားလုံးအကြောင်းသည်အဘယ်သို့ဘဝပြောတယ်, ငါ့အလုပ်, မပင်မိသားစု - သို့သော်ယေရှု. ဘယ်လိုအကြှနျုပျ၏ Self-ဗဟိုပြုနိုင်, အဆင့်အတန်း-အစွဲအလမ်း worldview လာမည့်အမှန်တရားမှရှင်သန်?
ငါမဆိုအားကစားအတွက်အအောင်မြင်ဆုံးကစားသမားကသတိထားမိတယ်, အချန်ပီယံ, အားလုံးဘုံတစ်ခုခုများ. သူတို့ကအနိုင်ရတဲ့နဲ့စွဲများ. ထိုသူတို့၏စွဲ, အနိုင်ရဤနက်ရှိုင်းသောအလိုဆန္ဒ, ဂိမ်းမှာသူတို့ရဲ့အခြားအလိုဆန္ဒများအပေါငျးတို့သမည့်ဟန်ရှိပါသည်. ဒါကြောင့်သူတို့ကထောက်ခံချက်နှင့်အတူအဓိကအားဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မနေ, ဒါမှမဟုတ်မီးမောင်းထိုးပြရက်ကြောင့်မှားယွင်းအောင်, သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏စာရင်းဇယား padding. အကယ်စင်စစ်သူတို့ကပစ္စည်းပစ္စယအကြောင်းစဉ်းစား, ဒါပေမဲ့တစ်နေ့တာရဲ့အဆုံးမှာ, သောသူတို့သည်အဘို့ကစားသောအရာကိုမင့်. သူတို့ကအနိုင်ရမှကစား. ဒါကြောင့်သူတို့အကျိုးခံစားရမယ်လို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဆိုပါက, ဒါပေမဲ့မအသင်း, သူတို့လွန်. သူတို့ကပဲအနိုင်ရချင်.
ကောင်းပြီကြောင်းအားကစားဂိမ်းတွေနှင့်အတူဖွင့်. ၏ဘဝအကြောင်းထင်စေ. ဘဝမှာ, ကြောင်းအရာသည်ပေါလုနှင့်အတူစွဲလမ်းသည်. ရှိသမျှသည်အခြားသောအလိုဆန္ဒများမည့်ဟန်ရှိပါသည်ကြောင်းကိုအလိုဆန္ဒ. မိမိအအခြားလောကဓံတရား၌ကျင်လည်အားလုံးယူကြောင်းကိုစိတ်အားထက်သန်သူသည်ခရစ်တော်. ဒါဟာသူဘဝကိုမုန်းမယ့်, သို့မဟုတ်မိသားစု, သို့မဟုတ်သက်သာ; ယရှေုသညျဂုဏျတငျလွန်ကဲကြောင်းဖွင့်ဖွင့်. ဒါဟာအဓိကအရာပါပဲ. ထိုသူသည်ကျမ်းပိုဒ်အတွက်ရေးသားခဲ့သည်အဘယျအရာမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်.
ပေါလုကဖိလိပ္ပိအတွက်ကပြောပါတယ် 1, သူအသက်ရှင်နေထိုင်သို့မဟုတ်သေဆုံးနိုင်ကြောင်း; ယရှေုသညျဂုဏ်ပြုခံရလို့သူကဒဏ်ငွေဖြစ်ချင်ပါတယ်. ထိုအခနျးငယျ 21 အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားပါသည်. သူကအရာတစ်ခုခုကိုနားလည်. အသက်ရှင်ရန်ခရစ်တော်ဖြစ်၏. ဘဝကခရစ်တော်ဖြစ်၏. ယရှေုအားဖြင့်၎င်း, ယရှေုကိုဖန်တီးခဲ့ကြ. ယရှေုသညျကြှနျုပျတို့၏နရော၌ရပ်လျက်သူကိုသနားကယ်တင်ရှင်သည်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်တာသစ်ကမ်းလှမ်း. ယရှေုသညျခမညျးတျောရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာမခံ. ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားလုံးအတှကျအလှုံ့ဆျောမှုရှိရမည်. ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေလှမ်းတိုင်းလှုပ်ရှားမှုတိုင်းရဲ့နောက်ကွယ်ကတွန်းအားဖြစ်သင့်. ဒါဟာအားလုံးယေရှုအကြောင်းဖွင့်. ခွဲယရှေုထံမှကောင်းသောအရာမဘဝရှိပါတယ်, ယရှေုသညျဘဝမရှိဘဲအဓိပ္ပာယ်ကိုကြောင့်. အသက်ရှင်ရန်ခရစ်တော်ဖြစ်၏.
သင်၏အသက်တာသင့်အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမဲ့ယေရှုအကြောင်း. ဒါကြောင့်ဒီအရာခပ်သိမ်းကိုမြင်သောလမ်းကိုပြောင်းလဲ.
အဘယျသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိပ်မက်တွေနှင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အကြောင်း? သငျသညျကြီးမားတဲ့အိပ်မက်နှင့်ကြီးမားသောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရှိသည်သင့်, ဒါပေမဲ့သူတို့သညျယရှေုအပေါ်ဗဟိုပြုရပါမည်. ကျနော်တို့သူဟာသူသည်ဖြစ်ကိုယ်တော်ကိုပြသသောလမ်းအတွက်အသက်ရှင်ရန်ဖန်တီးခဲ့ကြ. ပေါလုကဖိလိပ္ပိအတွက်ကပြောပါတယ် 1 သူသည်ဇာတိပကတိ၌အပေါ်အသက်ရှင်တော်မူသည်လျှင်ကိုယ်တော်အဘို့အသီးကိုသီးတတ်လုပ်အားကိုဆိုလိုသည်က.
ဒါဟာရယ်စရာပုံပြင်၏အကြှနျုပျကိုသတိပေး. တစ်ကြိမ်, ငါ Dallas ရှိခဲ့ငါသည်ငါ့အကြိုက်ဆုံးကြော်ကြက်သားအစက်အပြောက်၏တဦးတည်းသွားကြ၏, ဝီလျံရဲ့ကြက်သား. အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုအမြဲကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့ကြက်သားဒါသည်ကောင်း. ဝန်ဆောင်မှုကတဆင့်မောင်းမကောင်းတဲ့ခဲ့သည်, ထိုအခါမူကားငါရှေ့ရ. သူပြောနေတာကျောထဲမှာပယ်င်ငါသည်သူ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရ. ထိုအခါသူကပြောပါတယ်, "အိုး, ငါသည်သင်တို့ကို bro အကြောင်းကိုမေ့လျော့ကြ၏။ "သင်မေ့လျော့ဘာကိုဆိုလိုဘူး, ငါ့မကောင်းတဲ့? သငျသညျအလုပျမှာ! ဒါကသငျသညျအလုပျမှာအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုင်. သင်ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်ဖို့ကိုမေ့လျော့ခဲ့? သူကအာရုံတယ်.
အလားတူပင်သော်လည်း, ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူအာရုံနေကြတယ်. ကျနော်တို့လုပ်ဖို့ကဒီမှာတင်ခဲ့ကြရတယ်အဘယျအကိုမေ့လျော့. အကြှနျုပျတို့ကိုယ်တော်အဘို့အအလုပျလုပျအကြောင်းကိုအသည်းအသန်မဟုတ်ပါဘူး, ကမ္ဘာ့အရှားကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲထုတ်ပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရှိသမျှကိုတောက်ပသောအရာတို့ကို.
ခရစ်တော်အဘို့ကြိုးစားအားထုတ်ငါတို့ရှိသမျှသည်တရားဟောဆရာရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်မဆိုလိုပါ. ကျနော်တို့ရှေ့နေတွေလိုအပ်ပါတယ်, အဆိုတော်တွေဟာ, အတွင်းရေးမှူး, စားပွဲထိုး, ယရှေုသညျခစျြသောစတိုးဆိုင်မန်နေဂျာ. ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကျွန်တော်မျိုးအပေါင်းတို့သည်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုကိုပြောင်းလဲသွားသို့မဟုတ်လုပ်ဖို့ပုံစံမျိုးရယူသင့်ပါတယ်မဆိုလိုပါ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင့်လိမ့်မည်သော်လည်း. အဘယျသို့ကယ့်ကိုဆိုလိုသည်ဖြစ်ပါသည်, ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ယုံကြည်သူများသည်အတိုင်းပြုပါရန်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီရာနှငျ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သင့်, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောအခြေအနေများတွင်ထွက်အလုပ်လုပ်ပုံကိုထုတ်တွက်ဆ. ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောဘဝအသက်တာ၌ကွဲပြားခြားနားသောကွညျ့ရှုပါလိမ့်မယ်, ငါတို့မူကားသူ၏ဘုန်းအသရေဖို့ကလုပျနိုငျ.
ငါအချို့တရားဟောဆရာမှားကျမ်းပိုဒ်ကိုသုံးသိ, အဘယ်သူမျှမစမ်းသပ်မှုတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်. သူတို့၏အမြင်တွင်ခရစ်တော်ကိုရရှိနိုင်ပါကောင်းကျိုးဘဝယခုအခါဘယ်စမ်းသပ်မှုတွေကနေအခမဲ့တစ်ဦးအသက်ပေတည်း. ငါသည်ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုပြုနိုင်သည် - ဒီကယ့်ကိုဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ငါဘတ်စကက်ဘောမှာစို့ပင်သော်လည်းဒါက, ခရစ်တော်အားဖြင့်ငါ NBA All-ကြယ်ပွင့်စေနိုင်ပါတယ်? အဘယ်သူမျှမ, ပေါလုကိုချမ်းသာသို့မဟုတ်ဆင်းရဲသားကိုရယ်ရှိမရှိဟူမူကားခဲ့သည်, ငါအကြောင်းအရာပေါ့. ငါသည်ခရစ်တော်ရှိသည်ကြောင့်.
ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့သကော်ပိုရေးရှင်းလှေကားရဲ့ထိပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုလကျမခံပါမညျသောငါတို့မွကွေီးမိခင်နှင့်ဘိုးဘေးများ၏အချို့မကြိုက်သည်မဟုတ်. ဘုရားသခင့ status ကိုတောင်းဆိုပါဘူး, သူသစ်စာရှိမှုတောင်းဆိုနေပြီ.
ငါပေါလုရဲ့စကားဖတ်သောအခါငါစိန်ခေါ်တယ်, အထူးသဖြင့်ပေါလုရဲ့အခွအေနေစဉ်းစား. ပေါလုကတစ်ဦးအဓမ္မအခြေအနေများ၏အလယ်၌တည်ရှိ၏. ဒါပေမဲ့မှန်ဘီလူးသူအပြောင်းအလဲများအရာအားလုံးကနေတဆင့်ရှုမြင်. အသက်ရှင်ရန်ခရစ်တော်ကသူမှတဆင့်မိမိအရုံးတင်စစ်ဆေးရှုမြင်မှန်ဘီလူးဖြစ်ပါတယ်.
တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာစမ်းသပ်မှုတွေ၏အလယ်၌ကလေးတစ်ဦးကဲ့သို့မထိုက်မတန်ပစ်, ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှိသမျှအခြေအနေကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းထင်သောကြောင့်,. ကျနော်တို့ထင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများမှတိုင်ကြား, ဒါကြောင့်ဘယ်လောက်မမျှတအကြောင်း, ထိုသို့ဘယ်လောက်ခက်ခဲ. ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေကျွန်တော်တို့ကိုသက်သာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနောက်ဆုံးမှာဖြစ်ကြသည်ထင်သောကြောင့်, ကျနော်တို့ကြီးပြင်းဒေါသဝုန်းဒိုင်းကြဲပစ်လိုက်. ဒါပေမဲ့သူတို့မဟုတ်ပါဘူး. သူတို့ဟာယေရှုအကြောင်းပါပဲ. ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားစမ်းသပ်မှုတွေကတဆင့် wrestle မယ်လို့, အကယ်. အစားကျွန်တော်အလယ်၌သညျယရှေုကိုဂုဏ်ပြုဖို့ဘယ်လိုအာရုံစိုက်မယ်လို့ဘယ်လောက်မသက်မသာငါတို့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်. ဒါကကောင်းသောအသက်တာရဲ့.
ယရှေုသညျန်းကျင်သင်၏အသက်တာကိုတည်ဆောက်ပါကပျင်းစရာသို့မဟုတ်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်မရှိဘဲဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုလို? ဘယ်ဟုတ်မလဲ. ငါသည်မုသာကိုတစ်ခါတစ်ရံပိုမိုဆွဲဆောင်မှုထင်ရစေခြင်းငှါသိ, ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကကသေလွန်သောသူတို့သည်အဆုံးဖွင့်သည်. ဒါဟာသိပ်နိမ့်ရိုက်ကူးမယ့်. ယရှေုသညျအောကျပါကျွန်တော်တို့အမှုအရာပျော်မွေ့ကြဘူးမဆိုလိုပါ, ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့လက်ျာသူတို့ကိုပျော်မွေ့ဆိုလိုသည်. အဲဒီအစားသူတို့ကပိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြေကွဲဖွယ်မှဦးဆောင်.
ထိုအခြေအနေတွင်ခံစားကြသောအခါအရာအားလုံးပိုကောင်းကဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့သည်. ကိုယ်တော်ကိုပတ်ပတ်လည်ကိုတည်ဆောက်ကြသောအခါချစ်ကြည်ရေးကိုပိုမိုပျော်စရာဖြစ်ပါသည်. နှစ်ဦးတို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်တော်ကလူအသီးအသီးအခြားခွင့်လွှတ်, သောချစ်ကြည်ရေးခြိုစေသည်. သငျသညျပိုက်ဆံခံစားတက်လွတ်မြောက်လာနိုင်ပါတယ်, သင်ကဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြဘူးသောအခါ.
ဝမ်းမြောက်ကြာရှည်မပါဘူး. အခညျြးနှီးသောအရာတို့ကိုလှည့်ပတ်သူတို့ရဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်သူများသည်ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းအရာသည်မိမိတို့ကိုယ်ကို set up. ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ပတ်ပတ်လည်ကသူတို့ရဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်သောသူတို့အားဖကျြဆီးခံရဘယ်တော့မှနိုင်. ဒါဟာဘုရားသခင်ထံမှလက်ဆောင်တစ်ခုဖွင့်ကြောင့်မပယ်ရှားမရနိုငျ.
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းသောအသက်တာအကြောင်းကိုအသေးစိတ်အချို့သည်များ, ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာမှလာပါဘူး? ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရကြဘူး?
III ကို. အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝမေတ္တာရှင်ဘုရားသခင်ထံမှလက်ဆောင် Is
ဘုရားသခငျသညျသငျသညျအကောငျးဘဝအသက်ရှင်ရန်လိုလား. သူဟာကောင်းသောအသက်တာကိုအသက်ရှင်ဖို့သင်ဖန်တီးထားသော. ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်တရားကနေကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်အဘယ်သို့သောအ. ကျွန်တော်တို့ကပြောသည်ခဲ့ဖူးတဲ့မုသားဘုရားသခငျသညျအကောငျးဘဝကနေကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုလားကြောင်း. သူကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဓာတ်ကျဖြစ်အပေါင်းတို့နှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအပေါ်ထွက်လက်လွတ်ဖို့လိုလားလိုပဲ. သို့သော်ရယ်စရာင်.
သူကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပွစျမှားပါနှငျ့ပငျသော်လည်းကိုယ်တော်ကိုထဲကခြားနားခဲ့ကြသည်နိုင်အောင်အများကြီးကိုချစ်သောသူ, သူကကျွန်တော်တို့ကိုကရှိသည်ဖို့အတှကျနိုင်ရန်အတွက်သညျယရှေုကိုစလှေတျ. ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းခဲ့ကြ, အားလုံးကောင်းသော၏အရင်းအမြစ်.
ငါပေါလုမှလေ့လာသင်ယူကောင်းကျိုးအသက်တာ၏ရုပ်ပုံအကြားအများအပြားကွဲပြားမှုရှိ, ငါသည်ထိုယဉ်ကျေးမှုကနေလေ့လာသင်ယူပုံ. သို့သော်ထိုအကြီးမားဆုံးကွဲပြားခြားနားမှုတယောက်ကျွန်တော်အဲဒီမှာရပုံ. ကမ္ဘာကြီးကကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေရန်ရှိသည်ကတစ်ဦး "ကောင်းသောဘဝ" ရောင်း. ထိုအပင်အခက်ခဲဆုံးအလုပ်လုပ်ကိုင်သောသူတို့၏အမျိုးအခြို့သောကြောင့်အောင်မြင်ရန်, ဒါကြောင့်လက်လှမ်းမမီထဲကနေဆဲ. သို့သော် "ကောင်းကျိုးဘဝ" ၏သမ္မာကျမ်းရုပ်ပုံကွဲပြားခြားနားသည်. ဒါဟာအားလုံးမှရရှိနိုင်မယ့်ဟာအခမဲ့ဆုကြေးဇူးကိုဖွင့်.
ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဘို့သင့်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ကြ. ဤရွေ့ကား, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပွုမဟုတ်ပါဘူး; ဘုရားသခငျ၏ဆုကြေးဇူးဖွစျသညျ, အကျင့်ကိုကျင့်၏မရလဒ်, အဘယ်သူမျှမဝါကြွားစေခြင်းငှါဒါ. (ဧဖက် 2:8-9 တော်မူ၏)
ယောဟနျသခုနှစ်တွင် 11, ယရှေုသညျကပြောပါတယ်, "ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း, အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏. အကြင်သူသည်ငါ့ကိုယုံကြည်သော, သူသေဆုံးသော်လည်း, သေးသူအသက်ရှင်ရလိမ့်မည်, ငါ့ကိုတှငျနထေိုငျနှင့်ယုံကြည်သောသူလူတိုင်းသေဆုံးဘယ်တော့မှမရကြလိမ့်မည်။ "သတငျးကောငျးသည်.
ယရှေုသညျကိုးစားငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ပြန်ကြသည်ကိုဆိုလိုသည်, ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ခံစားခဲ့သောကြောင့်, အံ့သြဖွယ်သတင်းအရာဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့ကသူ့နှုတ်ကပတ်တော်၌ယခုကိုယ်တော်ခံစားရ. ကျနော်တို့အားကစားကိုကြည့်ကိုချစ်, အရာနှင့်ကြီးစွာသောအဆိုတော်ကျွန်တော်တို့တန်ခိုးအာနုဘော်မွေ့လျော်သောကြောင့်,. သူတို့ကိုနေသူများကဖန်တီးသောသူသညျဘုရားသခငျထက်မကြီးမြတ်တန်ခိုးအာနုဘော်ရှိ၏. သူ၏တန်ခိုးအာနုဘော်သူတို့စိတ်ကြင်နာတတ်သောကြည့်ရှုစေသည်.
ပေါလုကအသေခံဖို့ "ပြောနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဤသူကားအကျိုးစီးပွါး,"ဟုသူကသေဆုံးသို့မဟုတ်နေထိုင်ခဲ့ရှိမရှိသောကြောင့်,, ယရှေုသညျဂုဏ်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း. ဘဝကသူသညျယရှေုကိုဝတျပွုဖို့ရရှိသွားတဲ့ကိုဆိုလိုသည်နှင့်သေခြင်းသူယေရှုနှင့်အတူဖြစ်ရရှိသွားတဲ့ဆိုလိုသည် - နှင့်သူမဟုတ်ဘဲဖြစ်ချင်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ် (ဖိလိပ္ပိ 1:23). ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါလုထံမှသင်ယူနိုင်. အဆိုပါအမှန်တရား, ယောက်ျား၏အထံတော်၌ငွေရတတ်သောသူသည်ညစ်ညူးသောဖြစ်ဖို့ထက်ယေရှု၏ရှေ့တော်၌ဆင်းရဲသောသူသည်အမှိုက်ဖြစ် သာ. ကောင်း၏ရဲ့.
ယေရှုနှင့်အတူဖြစ်ရန်သင့်အားကြာမြင့်စွာလုပ်ပါ? ငါတို့သည်သေသည်မှပြောနိုင်မည်ဘယ်တော့မှအကျိုးစီးပွါး, ကျနော်တို့တကယ်ကိုသညျယရှေုကိုချစ်သည်အထိ. သငျသညျအထံတော်ယခုဘဝထက်ပိုပြီးကိုချစ်လုပ်ပါ? ဆာလံ 73. အဲဒီမှာရဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ကိုယ်တော်မှာငေးနှင့်သင်၏ရူပါရုံကိုမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးသောအမှုအရာမှလှည့်ဖြင့်ဖြစ်တယ်. ကျွန်တော်တို့ကပိုသညျယရှေုကိုမချစ်ကြဘူးဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကတွေးမိ, ငါတို့မူကားကိုယ်တော်နှင့်အတူရငျးနှီးမှုကနေကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်သောအမှုအရာမှတွယ်ကပ်. ဖွင့်နှင့်ကိုယ်တော်ကိုပြေး. ဤသည်လည်းယုံကြည်ခြင်းကိုတစ်ဦးရန်ပွဲသည်.
ငါသည်ကောင်းသောအသက်တာ၏အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ရုပ်ပုံမမြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါအရေးမပါဘူးပစ္စည်းပစ္စယပြီးနောက်လိုက်ဖမ်းငါ့အသက်ကိုဖြုန်းတီးခဲ့ကြပေသည်. သို့သော်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ငါ့ကိုသူတို့အလေးစကားသည်ပြသ: အသက်ရှင်ရန်ခရစ်တော်ဖြစ်၏. ထိုအခါသူသည်ငါ့ကိုအကောင်းတစ်ဘုရားသခင်၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ဖို့ကျေးဇူးတရားကိုပေး၏.
အဘယျသို့သည်ကောင်း? အဘယ်သူသည်ကောင်းသောသတ်မှတ်ပါတယ်? ဘုရားသခင့ပါဘူး. ကောင်းသောယရှေုသညျဂုဏျတငျနှင့်ကိုယ်တော်နှင့်အတူဖြစ်ခြင်းသည်. နေသမျှကာလပတ်လုံးငါသည်မုသာစကားကိုယဉ်ကျေးမှုကိုယုံကြည်သည်သကဲ့သို့ငါ့ကိုသို့ပြောသည်, ငါသည်ကောင်းသောအသက်တာကိုအသကျရှငျမခံခဲ့ရ. သို့သော်လည်းငါသည်အကောင်းတစ်ဘုရားသခင်၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ဖို့စတင်ခဲ့ကြသောအခါ, အကြှနျုပျ၏ကောင်းသောအသက်တာကိုစတင်. ငါသညျယရှေုအားဖြင့်သက်တမ်းတိုးတဲ့ဘဝအဖြစ်ကောင်းသောအသက်တာကိုမြင်လာတယ်, ယရှေုသညျကမောင်းနှင်, ယေရှု၏ဘုန်းအသရေဖို့နေထိုင်ခဲ့. မိမိအဘို့အသက်ရှင်တော်မူသည်သောသူသည်ယခုဘဝ၌တည်တံ့ဘာမှမရောက်တတ်သော, သူကသာလာမည့်အတွက်ကြီးကျယ်သောဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်. ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အဘို့အသက်ရှင်တော်မူသည်သောသူသည်ယခုကောင်းသောအသက်တာ၏တစ်အရသာရရှိသွားတဲ့, နှင့်သူ၏အသေခံမှသာသူကအများဆုံးအလိုရှိအရာကိုကိုယ်တော်ဆောင်တတ်၏.
sheyi • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 11:39 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီငါ့အားခဲ့တစ်ဦးကအကြီးအကောင်းကြီးမင်္ဂလာ. ထာဝရဘုရားသညျ့ပဌနာဖြေကြားထားပါတယ်. အာမင်
Bman • နိုဝင်ဘာလ 15, 2013 တွင် 2:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်